Mas'uuliyiin lagu afduubtay Sanaag - BBC News Somali
Mas'uuliyiin lagu afduubtay Sanaag
Mas'uuliyiin lagu afduubtay meel u dhow magaalada Ceerigaabo.
Sida uu goor dhoweyd uu cadeeyay guddoomiyaha gobolka Sanaag, Axmed Cabdi Fly, waxaa maanta lagu afduubtay tuulada Yubbe oo 50-km bari ka xigta magaalada Ceerigaabo, guddoomiyihii gudiga doorashooyinka Somaliland ee gobolka Sanaag Axmed Cali Biixi, xildhibaanad Qamar Taleex oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Ceerigaabo iyo shan qof oo kale oo laba yihiin darawallada laba gaari oo ay wateen madaxdaasi.
Gudoomiyaha gobolka Sanaag, wuxuu BBC u sheegay in madaxdaasi dableydii qabsatay ay haataan geeyeen magaalada Dadhan.
Weriyaha BBC ee Hargeysa, Axmed Saciid Cige, oo caawa xildibaanad Qamar Taleex, telefoonka kula hadlay, waxa ay u sheegtay in la soo daayay oo haatan ay ku sugantahay magaalada Badhan. Waxay kaloo sheegtay in odayaasha deegaanka Badhan ku hawllanyihiin sidii loo soo dayn lahaa madaxda kale ee ay wada socdeen oo weli la haysto.
Wafdigan, ayaa masuuliyiinta Somaliland sheegeen in ay u socdeen wacyigelinta diiwaangelinta codbixiyaasha doorashada Somaliland. Warar kale oo soo baxay, ayaa sheegaya in wafdigan ay qabsadeen ciidamo taageersan maamulka Puntland ee badhan jooga.